UZongo kwabasengozini yokuchithwa yiTTM
UMASIBUSANE Zongo odlalela iTshakhuma usedunusele amaqembu amaningi ePSL abezama ukumnika umsebenzi kodwa ashaye adume ngazo Isithombe: BACKPAGEPIX
ZAKHELE XABA | May 22, 2020
USENGCUPHENI yokuphunyukwa yithuba lokubuyela kwi-Absa Premiership umdlali onekhono, uMasibusane “Zizou” Zongo, obukeka ezochithwa kwiTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) ekupheleni kwesizini.
Izikhulu zeTTM, edlala kwiGladAfrica Championship, zisanda kudalula ukuthi sekusele kancane zithenge iqembu elidlala kwiPremiership, futhi zizolithola ingakapheli isizini. Iqembu elikhona njengamanje lizodayiswa ukuze kutholakale imali yokugcwalisa, kuthengwe elisesigabeni esikhulu.
Okhulumela iTTM, uTshidino Ndou, utshele leli phephandaba ukuthi kunenqwaba yabadlali okuzodingeka iyofuna amatoho kwamanye amaqembu uma abaphathi abasha bengabayingi, ikakhulukazi abaphelelwa yizinkontileka ngenyanga ezayo ngoba ngeke banyukele nabo kwiPremiership.
Uthe uZongo, osexoshwe emaqenjini amaningi eNingizimu Afrika okukhona kuwona iSuperSport United, Chippa United nePlatinum Stars, ukwabasengcupheni yokudliwa yizembe ngenxa yecala elimlengelayo lokunyamalala. Kusafanele avele phambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe leqembu.
“UZongo simthathe siwazi umlando wakhe ongemuhle wokunyamalala. Ubekade esekhombisa ukuqoqeka. Siphazanyiswe ukubheduka kwe-Covid-19 ekutheni avele ekomotini eliqondisa ubugwegwe ngecala lokunyamalala. Angifuni ukukhuluma okuningi kodwa uzonele ngesenzo sakhe. Sizolinda isinqumo sekomiti,” kusho uNdou.
“Bakhona abadlali abanezinkontileka zeminyaka emibili kuya kwemithathu eqenjini. Labo sizonyukela nabo kwiPremiership. Abanye kufanele bayofuna amanye amaqembu uma abaphathi abasha bengabathathi. Ayikho nathi into esingayenza, lezi zinto ziyenzeka kuzona zonke izinkampani uma kunabaphathi abasha.”
Iqembu elikhona leTTM libiza uR10 million uma lithengwa umuntu waseLimpopo kodwa uma lithengwa owangaphandle uzohlukana no-R12 million. KwiPremiership izikhulu zeTTM kunamahlebezi okuthi zixoxa neBloemfontein Celtic neBidvest Wits enezinkinga zemali.
“Sizama ukugqugquzela osomabhizinisi baseLimpopo ukuthi bathenge iqembu ukuze lingaphumi esifundazweni. Sekusele kancane sithole iqembu kwiPremiership. Siqoke ukufuna ukulithenga manje ngoba baningi abakhuluma nomuntu olidayisayo,” kusho uNdou.